TRF amin'ny gazety 2020 - Ny fitiavana, firaisana ara-nofo ary ny Internet no valisoa
Home TRF ao amin'ny Press 2020
Hitan'ny mpanao gazety The Reward Foundation. Izy ireo dia manaparitaka ny momba ny asantsika ao anatin'izany: ny lesontsika momba ny loza mety hitranga amin'ny filokana maharitra amin'ny pôrnôgrafia; ny antso ho an'ny fanabeazana ara-nofo mahomby sy mifantoka amin'ny ati-doha amin'ny sekoly rehetra; mila fampiofanana ireo mpitsabo mpanampy NHS amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia sy ny fandraisan'anjaranay fikarohana amin'ny fihenan'ny firaisana ara-nofo ateraky ny pôrnôgrafia sy ny fikorontanan-tena maharikoriko. Ity pejy ity dia mirakitra ny fisehoantsika amin'ny gazety sy amin'ny Internet. Manantena izahay fa handefa tantara maro hafa rehefa mandroso ny taona 2020.
Raha mahita tantara misy TRF mbola tsy namboarinay izahay dia andefaso a Fanamarihana momba izany. Azonao atao ny mampiasa ny contact contact eo amin'ny faran'ity pejy ity.
Miantso ny hatsiaka amin'ny carte de crédit amin'ny tranokala vetaveta
Nosoratan'i Megha Mohan, ny lahy sy ny vavy ary ny mpanoratra momba azy BBC News, Zoma 8 Mey 2020
Orinasa lehibe manao carte de crédit dia tokony hanakana ny fandoavam-bola amin'ny tranonkala vetaveta. Izany no fahitan'ny vondrona mpanao fampielezan-kevitra iraisam-pirenena sy vondrona manao fampielezan-kevitra milaza fa miasa hiadiana amin'ny fanararaotana ara-nofo.
Taratasy iray hitan'ny BBC, nosoniavin'ny mpanao fampielezan-kevitra sy vondrona fampielezan-kevitra mihoatra ny 10, no nilaza fa ireo tranonkala mamoafady dia “mampihetsi-po ny herisetra ara-nofo, ny fanaovana firaisana ara-nofo ary ny fanavakavaham-bolon-koditra” ary ny famoahana atiny izay misy fanararaotana ara-nofo sy fanondranana ankizy an-tsokosoko.
Ny tranokala malaza iray, Pornhub, dia nilaza fa “ilay taratasy [dia] tsy hoe diso fotsiny fa niniana namitaka.”
Nilaza tamin'ny BBC i Mastercard fa manadihady ny fitakiana natao tao amin'ilay taratasy tao amin'ireo tranokala vetaveta izy ireo ary “hamarana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tambajotranay” raha voamarina ny hetsika tsy ara-dalàna ataon'ny tompon-karatra iray.
Orinasa credit card 10 lehibe
Nalefa tany amina orinasa mpanao carte de crédit 10 lehibe ny taratasy, anisan'izany ny "Big Three", Visa, MasterCard ary American Express. Nangataka ny fampiatoana ny fandoavana ny fandoavam-bola avy hatrany amin'ireo tranonkala mamoa fady ireo nanao sonia avy amin'ny firenena, anisan'izany ny UK, US, India, Oganda ary Australia.
Ireo nanao sonia ny taratasy dia misy ny vondrona tsy mitady tombombarotra mpandala ny ara-nofo ny National Center on Sexual Exploitation (NCOSE) any Etazonia, sy ireo vondrona mpiaro ny zon'ny ankizy na ny vehivavy sy ny zon'ny ankizy hafa.
Ny taratasy dia manamafy fa tsy azo atao ny "mitsara na manamarina ny fanekena amin'ny horonan-tsary amin'ny tranokalan'izy ireo, mainka fa ny horonantsary webcam mivantana" izay "mahatonga ny tranokalan'ny pôrnôgrafia ho lasibatra ho an'ny mpivaro-tena, mpanararaotra ankizy, ary ny hafa mizara horonantsary tsy mahazatra.
"Hitanay ny fitarainana manerantany momba ny voka-dratsin'ny fizarana sary vetaveta amin'ny fomba maro tato anatin'ny volana vitsivitsy," hoy i Haley McNamara, talen'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena Momba ny Fanararaotana ara-nofo, UK, sampana iraisam-pirenena an'ny NCOSE. ary sonia ny taratasy.
"Izahay ao amin'ny vondrona iraisam-pirenena miaro ny ankizy sy ny vondrom-piarahamonina fanararaotana ara-nofo dia mitaky ivon-toerana ara-bola hanadihady ny andraikitr'izy ireo amin'ny sehatry ny pôrnôgrafia, ary hanapaka ny fifandraisana amin'izy ireo," hoy izy tamin'ny BBC.
Navoaka tamin'ny volana aprily ny India Child Protection Fund (ICPF) tamin'ny volana aprily ny tatitra iray momba ny filan'ny ankizy fanararaotana ankizy amin'ny tranonkala vetaveta. Nilaza ny fikambanana fa nisy fitomboana be eo amin'ny fangatahana ny fisavana zaza tsy ampy taona any India, indrindra hatramin'ny nanidiana ny coronavirus.
Fanaraha-maso sary vetaveta amin'ny Internet
Pornhub, ilay tranonkala fandefasana sary vetaveta malaza indrindra, dia voatonona ao amin'ilay taratasy. Tamin'ny taona 2019, 42 tapitrisa no isan-taona ny fitsidihany, mitovy amin'ny 115 tapitrisa isan'andro.
Ny Pornhub dia nodinihina tamin'ny taon-dasa raha ny iray tamin'ireo mpamatsy ny atiny - Girls Do Porn - no nanjary foto-kevitra tamin'ny FBI.
Ny FBI dia niampanga olona efatra miasa amin'ny orinasa mpamokatra izay namorona ny fantsom-behivavy mitaona vehivavy hanao sarimihetsika mamoa fady amin'ny fiheveran-diso. Nesorin'i Pornhub ny fantsona Girls Do Porn vantany vao vita ny fiampangana.
Raha nilaza ny heviny tamin'ny BBC tamin'ny volana feb momba ity raharaha ity i Pornhub dia nilaza fa ny politikany dia ny "fanesorana votoaty tsy nahazoana alalana raha vao fantatsika izany, izay tena nataontsika tamin'ity tranga ity".
Tamin'ny volana Oktobra tamin'ny taon-dasa dia lehilahy iray Florida 30 taona, Christopher Johnson, dia niatrika fiampangana noho ny fanararaotana ara-nofo ny 15 taona. Ny horonan-tsary momba ilay fanafihana voalaza dia navoaka tao amin'ny Pornhub.
Tao anatin'io fanambarana io ihany tamin'ny BBC tamin'ny volana febroary, nilaza i Pornhub fa ny politikany dia ny "fanesorana votoaty tsy nahazoana alalana raha vao fantatsika izany, izay tena nataontsika tamin'ity tranga ity".
Ny Internet Watch Foundation, fikambanana iray any UK izay manampahaizana manokana amin'ny fanaraha-maso ny fanararaotana ara-nofo an-tserasera - indrindra ny ankizy - dia nanamafy tamin'ny BBC fa nahita 118 tranga fanararaotana ara-nofo ankizy sy horonan-tsary fanolanana ankizy tao amin'ny Pornhub teo anelanelan'ny 2017 sy 2019. Miara-miasa ny vatana miaraka amin'ny polisy sy governemanta manerantany hanangan-tsaina ny atiny tsy ara-dalàna.
Tao anaty fanambarana iray tamin'ny BBC, nilaza ny mpitondra tenin'ny Pornhub fa manana «fanoloran-tena mafy orina hamongorana sy hiady amin'ny atiny tsy ara-dalàna rehetra, ao anatin'izany ny fitaovana tsy mifanaraka amin'ny taona sy ny tsy ampy taona. Ny soso-kevitra rehetra raha tsy izany dia tsy mifanaraka amin'ny voasokajy sy raha ny zava-misy. ”
“Ny rafitry ny fanaraha-maso votoatintsika dia lohalaharana amin'ny indostria, amin'ny fampiasana teknolojia mitarika sy teknika antonony izay mamorona dingana feno hamantarana sy hialana amin'ny votoaty misy atiny tsy ara-dalàna.
Nilaza i Pornhub fa nalefan'ny fikambanana “izay manandrana ny fironana hanao firaisana ara-nofo sy ataon'ny polisy ny olona - tsy hoe diso fotsiny izany fa minia mamitaka.”
American Express dia nanana politika manerantany nanomboka tamin'ny taona 2000. Milaza ny politika fa mandrara ny fifanakalozana ho an'ny atiny nomerika ho an'ny olon-dehibe izay heverina fa ambony dia ambony ny risika, miaraka amin'ny fandrarana tanteraka ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny tranokala Smartmoney tamin'ny 2011 dia nilaza ny mpitondra tenin'ny American Express tamin'izany fotoana izany fa noho ny fifanolanana avo lenta, ary fiarovana fanampiny amin'ny ady amin'ny pôrnôgrafia ho an'ny ankizy.
Na izany aza, nandefa ny taratasy tany amin'ny American Express ihany koa ireo fikambanana, satria nilaza izy ireo fa ny safidy amerikana amerikana dia natolotra tamin'ny tranokala mamoa fady - ao anatin'izany ny iray manokana momba ny atiny misy ny zatovo.
Ny mpitondra tenin'ny American Express dia nilaza tamin'ny BBC fa na dia mbola mijoro aza ny politika manerantany, ny American Express dia nanana mpanamory fiaramanidina iray niaraka tamin'ny orinasa iray namela ny fandoavam-bola amin'ny tranokala sasany mamoaka sary vetaveta raha natao tao Etazonia sy tamin'ny carte de crédit an'ny mpanjifa amerikana.
Orinasa lehibe manao carte de crédit hafa, ao anatin'izany ny Visa sy MasterCard, dia mamela ny tompona carte de crédit sy debit hividy pôrnôgrafia amin'ny Internet.
Tamin'ny mailaka iray tany amin'ny BBC, nilaza ny mpitondra tenin'ny Mastercard fa "eo am-panadihadiana ireo fanambarana voalaza ato aminay tao anaty taratasy izy ireo izao.
“Ny fomba fiasan'ny tamba-jotra dia ny mampifandray mpivarotra amin'ny tamba-jotra antsika ny banky hanaiky ny fandoavana karatra.
“Raha manamafy ny asa tsy ara-dalàna na ny fanitsakitsahana ny lalànay izahay (ataon'ny tompona karatra), dia hiara-miasa amin'ny bankin'ny mpivarotra izahay na hampanaraka azy ireo na hampiato ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tambajotranay.
"Mifanaraka amin'ny fomba niarahanay niasa tamin'ny maso sy ny maso ivoho mpampihatra lalàna toy ny Ivon-toerana Nasionaly sy Iraisam-pirenena ho an'ny Ankizy tsy hita sy voaroaka."
Ny hetsika sasany dia nataon'ny orinasa mpandoa vola an-tserasera mba hanalavirana ny tenany amin'ny sehatry ny pôrnôgrafia.
Tamin'ny volana novambra 2019, Paypal, ilay orinasa fandoavam-bola an-tserasera manerantany, dia nanambara fa tsy hanohana ny fandoavam-bola intsony amin'ny Pornhub izy ireo satria mandrara ny fanohanana ireo "fitaovana na serivisy mirona amin'ny firaisana" sasany.
Tao amin'ny bilaogin'izy ireo, nilaza i Pornhub fa "tototry ny" fanapahan-kevitra izy ireo ary hamela modely sy mpilalao an-tsehatra an'arivony an'arivony niantehitra tamin'ny famandrihana avy amin'ny serivisy premium nefa tsy nandoa vola.
Mpaninana sary vetaveta iray mizara fitaovana ao amin'ny Pornhub, ary nangataka ny tsy hitonona anarana, nilaza fa hisy fiatraikany ratsy amin'ny vola azony ny fihenan'ny fandoavam-bola.
"Raha ny marina, dia kapoka amin'ny vatana izany," hoy izy. “Hamafana ny karamako manontolo izany ary tsy ho fantatro ny fomba hahazoana vola, indrindra fa amin'ny fanidiana.”
Taorian'ny fanerena mafy ny hitaky andraikitra bebe kokoa avy amin'ireo tranonkala mamoa fady, Senatera Ben Sasse avy any Nebraska dia nandefa taratasy tany amin'ny Departemantam-pitsarana amerikana tamin'ny volana martsa nangataka tamin'ny mpisolovava jeneraly William Barr mba hanadihady momba an'i Pornhub noho ny resaka fanolanana sy fanararaotana natao tamina raharaha.
Tamin'io volana io ihany dia parlemantera sivy avy amin'ny antoko maro Kanadiana no nanoratra tamin'ny praiminisitra Justin Trudeau niantso ny hanaovana famotorana momba an'i MindGeek, ilay orinasan-draharahan'ny Pornhub, izay misy ny foibeny any Montreal.
Ireo nanao sonia ny taratasy:
Ivon-toerana iraisam-pirenena momba ny fanararaotana ara-nofo, UK,
Ivotoerana nasionaly momba ny fanararaotana ara-nofo, Etazonia,
Hiantsoantso miaraka, Aostralia
Tambajotra eropeana an'ny vehivavy mpifindra monina, Belzika
Teny vita nofo nofo Bolivia, Bolivia
Fahasalaman'ny haino aman-jery ho an'ny ankizy sy ny tanora, Danemark
Apne Aap, India
Survivor Advocate, Irlanda
Tambajotra afrikanina ho an'ny fisorohana sy fiarovana amin'ny fanararaotana ankizy sy ny fanaovana tsirambina, Liberia
The Reward Foundation, Ekosy
Fandaharam-pampianarana ho an'ny zazalahy, Oganda